ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများအားလုံး ပြန်တည်ဆောက်ရန် မြောက်ကိုရီးယားဆုံးဖြတ် - Xinhua News Agency
ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများအားလုံး ပြန်တည်ဆောက်ရန် မြောက်ကိုရီးယားဆုံးဖြတ်
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက် နှင့် ၁၂ ရက်များတွင် တာဝေးပစ် ခရုဇ်ဒုံးကျည်များ စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်နေပုံကို (KCNA) သတင်းဌာနက စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် ဖော်ပြစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပြုံယမ်း ၊ အောက်တိုဘာ ၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ(DPRK) က ယနေ့ အောက်တိုဘာ ၄ ရက် (တနင်္လာနေ့) နံနက် ၉ နာရီမှ စတင်ကာ မြောက်-တောင် ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများအားလုံးကို ပြန်တည်ဆောက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် KCNA သတင်းဌာန ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
ယင်းဆုံးဖြတ်သည် မြောက်-တောင် ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ထူထောင်ချင်သော တစ်မျိုးသားလုံး၏ စိတ်ဆန္ဒနှင့် မျှော်လင့်ချက်အား အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် တောင်-မြောက် ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများ ပြန်တည်ဆောက်ရေးကို ရည်ရွယ်သည့်ထုတ်ဖော်မှုအဖြစ် ပြီးခဲ့သော ကြာသပတေးနေ့နှောင်းပိုင်းတွင် မြောက်ကိုရီးယားထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်က ၎င်း၏ ကတိကဝတ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်မည့် ကြေညာချက်အား ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းက ဆိုသည်။
“ တောင်ကိုရီးယားအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ မြောက်-တောင်ဆက်ဆံရေးကို လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်အောင်လုပ်ဖို့နဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ပြန်လည်တည်ဆောက်မှုရဲ့ အဓိပ္ပါယ်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဦးစားပေး လုပ်ရမယ့် အရေးကြီးကိစ္စတွေကို ရှေ့လျှောက် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေအဖြစ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ် ” ဟု သတင်းတွင် ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် သဘောတူညီချက်တစ်စုံတစ်ရာမရဘဲပြီးဆုံးခဲ့သည့် မြောက်ကိုရီးယား နှင့် အမေရိကန်အကြား ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကတည်းက အေးခဲနေခဲ့သည်။ တောင်-မြောက် ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံ အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရေးလိုင်း(hotlines) သည် ဇူလိုင် နှောင်းပိုင်းတွင် ခဏသာ ပြန်လည်လည်ပတ်ခဲ့သော်လည်း တောင်ကိုရီးယား နှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံ၏ ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို ကန့်ကွက်သည့် အနေဖြင့် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် နှစ်ပတ်ကြာပြီးနောက်တွင် တောင်ကိုရီးယား၏ ပုံမှန် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို စတင်ငြင်းပယ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
PYONGYANG, Oct.4(Xinhua) — The Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) decided to restore all the north-south communication lines starting from 9:00 a.m. on Monday, according to the official Korean Central News Agency.
The report said the decision was announced to follow the promise made by the DPRK’s top leader Kim Jong Un inaspeech last Thursday in which he expressed the intention of restoring the cut-off north-south communication lines as part of the effort to realize the expectation and desire of the entire nation who want the north-south relations to be restored.
Inter-Korean relations have remained cold since the summit between the DPRK and the United States reached no deal in early 2019. The inter-Korean hotlines were briefly back in operation in late July, but the DPRK began refusing Seoul’s regular calls again two weeks later in protest against the joint military drills by South Korea and the United States. Enditem
Photo- Combo photo provided by the Korean Central News Agency (KCNA) on Sept. 13, 2021 shows the test-launches of long-range cruise missiles in the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) on Sept. 11 and Sept.